बन्दमा बिहानैबाट बम आतंक ! | NepalDut
बन्दमा बिहानैबाट बम आतंक !
वैशाख ५ गते २०७६
सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता सडक छैनन् तर बजार करिब बन्द छ, सडक सुनसान छ । नेता, कार्यकर्ता धेरैजसो पक्राउ परेपछि ठाउँ ठाउँमा बम, शंकास्पद वस्तु राखेर नेकपाले जनजीवनलाई त्रसित बनाउँदै बन्द प्रभावकारी बनाउने बाटो लिएजस्तो देखिन्छ ।
बिहीबारको बन्दमा बिहानै पाल्पमा विस्फोट भएको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई प्रभावित बनाउन शंकास्पद बस्तु राखिएको छ । पोखराका पोखराका २ ठाउँमा पनि शंकास्पद बस्तु फेला परेका छन् । पोखराको नदीपुर स्थित प्रदेशसभा भवन नजिकै र लेखनाथको सैनिक बस्तीमा शंकास्पद बस्तु भेटिएको हो । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली त्यहाँ पुगेका छन् ।
पोखरामा नेकपाको बन्दका कारण ठूला र लामा दुरीका गाडी नचले पनि साना सवारी चलेका छन् । उद्योग, कलकारखाना, अन्य प्रतिष्ठानमा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ । पसल पनि कममात्रामा मात्र खुलेका छन् । बजारमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ ।